Tiger Zinda Hai – Page 2 – Filimside.net
Filimka weyn Tiger Zinda Hai ee Mega Star Salman Khan iyo Katrina Kaif hogaamiye ka yihiin ayaa u suura gashay 50 Lakh ilaa 60 Lakh ganacsi u dhaxeeyo inuu sameeyo todobaadkiisa 7-aad sedexda maalmood ee ugu horeyso. Tiger Zinda Hai […]
Mega Star Salman Khan filimkiisa Tiger Zinda Hai weli waxbaa u harsan madaama uu guda galay todobaadkiisa todobaad asigoo si fiican ku bilaawday. Taariikhaan casriga lama arag filim Action ah oo sidaan u gadmaayo marka Gada […]
Tiger Zinda Hai ayaa noqday Blockbuster halyee ah madaama uu ganacsi aan joogsaneyn sameenayo sidoo kalena mudo dheer tiyaatarada baaqi ku yahay. TZH ayaa todobaadkiisa lixaad keenay 2.60 Crore (Trade Figure) sidaasna wuxuu ku noqday filimka labaad […]
Rasmi: TZH ganacsiga uu sameeyay todobaadkiisa lixaad Bye Bye PK
Mega Star Salman Khan filimkiisa TZH ayaa ganacsjganacsi adag sameeyay todobaadkiisa lixaad wuxuuna keenay 2.60 Crore. TZH todobaadka lixaad wuxuu ganacsi ahaan ka badan yahay wadarta Dangal iyo Bajrangi Bhaijaam ganacsiga ay sameeyeen todobaadkooda lixaad! […]
Mega Star Salman Khan filimkiisa Tiger Zinda Hai maanta ayuu si rasmi ah kaga talaabsan doonaa iskoorka lacagaha filimka PK oo ah haatan filimka sedexaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay aflaanta Af Hindiga lagu […]
Rasmi: filimka TZH iyo Isniintiisa 6-aad ganacsiga uu sameeyay PK oo sida ugu dhaqsiyaha badan looga talaabsan doono
January 30, 2018 Zakarie Abdi
Mega Star Salman Khan filimkiisa Tiger Zinda Hai ganacsigiisa ayuu iska wataa inkastoo tiyaatarada waa weyn uu ka heesto filimka Padmaavat. TZH ayaa keenay 25 Lakh Isniintiisa lixaad haatana ganacsigiisa todobaadkiisa lixaad wuxuu marayaa 1.95 Crore mudo afar […]
Mega Star Salman Khan iyo Katrina Kaif filimkooda Tiger Zinda Hai ayaa weli ganacsi adag sameenayo inkastoo Hindiya inteeda badan tiyaatarada ku yaalo filimka Padmaavat uu heeto. TZH waxaa u suura gashay inuu keeno 1.65 Crore (Trade […]
TZH ganacsiga uu jimcihiisa 6aad sameyay waxuu ka dhigay filmka sedexaad ee taariikh ahaan lacaga ugu badan soo xareeya!!
Filmka Tiger Zinda Hai ayaa si wacan isku celiyay jimcihisa lixaad waxuuna keenay lacago udhaxeay 60-65 Lakh waana ganacsi heer sare ah. TZH waxuu ka faaideystay Filmka Padmaavat oo 5 gobol laga daawanin inkastoo tiyaataraa […]